नेपाली भाषाको शिक्षा, साहित्य र नयाँ पिँढि - मालागिरी समाचार
३० फाल्गुन २०७४, बुधबार ०९:२४
Home›विचार/विश्‍लेषण›नेपाली भाषाको शिक्षा, साहित्य र नयाँ पिँढि
नेपाली भाषाको शिक्षा, साहित्य र नयाँ पिँढि
– घनश्याम वली
हामी सबैलाई थाहा छ नेपाल एउटा गरिब र विकासोन्मुख देश हो । नेपालको सम्पूर्ण वस्तु स्थितिलाई नियालेर हेर्ने हो भने अधिकांश मानिसहरु गरिब रहेको पाइन्छ । हाम्रो देशमा ठुला ठुला विद्वानहरु छन् ती सबै विद्वानहरुलाई हाम्रो देशको शिक्षाले उब्जाएको कुरा सबैलाई थाहा छ । यस्तो ठुला जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्षम शिक्षा नीति र पाठ्यक्रम तथा शिक्षा प्रणाली भएमा मात्र अझ ठुला र वैज्ञानिक हाम्रो देशमा उब्जन सक्छन् ।
हामी सबैलाई थाहा छ । हामी सधै शुद्धसँग बोल्नु र लेख्नुपर्छ । लेख्दा विशेष गरी (य, ए) (श, ष, स, ब, व) मा ध्यान दिनुपर्छ । ह्रस्व र दीर्घ गल्ती भेटाएमा त्यसलाई रोगी अंग सम्झेर ओखती गर्दै जानुपर्छ । बोल्दा पनि सकेसम्म शुद्धसँग बोल्नुपर्दछ । तपाई हामी सबैलाई थाहै छ सानालाई मायालुपन देखाएर र ठुलालाई आदर देखाएर बोलीको विकास सँगै भाषाको पनि सेवा गर्न सकिन्छ ।
अर्को कुरा हामी नेपाली भाषाको जननी संस्कृत भाषाप्रति पनि श्रद्धा र सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ । यो भाषा संसारको सबैभन्दा पुरानो भाषा पनि हो। नेपालीका कतिपय शब्दहरु संस्कृत भाषासंग मिल्दछन् । हाम्रो भाषासँगै शिक्षाको पनि महत्व रहन्छ । आजको वर्तमान युग यो युगमा शिक्षा केवल सिद्धान्तको रटाइमा मात्र हुन सक्दैन । मैले यो कुरा शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीहरुलाई अवगत गराउन चाहान्छु शिक्षा दिनु भनेको किताबी ज्ञान मात्र हैन अन्य व्यावहारिक ज्ञान आर्जन दिलाउनु पर्दछ । तब मात्र त्यो साँच्चै उपयोगी हुन सक्दछ अन्यथा प्रमाण पत्रहरुको पोको बोकेर सरकारी जागिर कुनै बेरोजगारहरुको शक्ति बिस्तार गर्ने काम मात्र हुन जानेछ । यहाँनेर के भन्न चाहान्छु भने सामुदायीक र संस्थागत विद्यालयहरुले व्यवसायिक शिक्षा दिने पाठ्यक्रम तर्जुमा हुनपर्दछ । त्यसको लागि कक्षा ८ बाट छनोटको थालनी हुनुपर्दछ । तिनीहरुलाई कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ कसरी राम्रो नतिजा ल्याउन सकिन्छ त्यो बेलैमा सोच्नु पर्दछ । तपाई सम्पूर्ण अभिभावक तथा शुभचिन्तक सहमत हुनुहुन्छ हुनुहुन्न त्यो त मलाई थाहा छैन तर अहिले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई पढाइको अलवा सिपमूलक तालिम दिलाउनु पर्दछ । त्यसपछि पो उसलाई बाँच्न कठिनाई हुँदैन त्यसकारण आफू मात्र हैन देश शिक्षित हुन्छ त्यसपछि मात्र ऊ सक्षम भएको मानिन्छ । मैले प्रसङ्गमा कुरा बदली रहेको छु । हामीलाई थाहा छ । सरकारी विद्यालय र नीजि विद्यालयको पाठ्यसाम्रगी पढाउने शिक्षक व्यवस्थापन र पठन पाठनको वातावरणमा देखिएको भिन्नतालाई मेटाउन ठोस कदम चाल्नु पर्दछ । यसका लागि शिक्षालाई राजनीतिक पृष्ठभूमि नबनाई बालबालिकाको भविष्य प्रति जिम्मेवार र सजक हुन आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाली शिक्षासँगै साहित्यको पनि कुरा गर्दा यस सन्र्दभमा कुरा जोडिहालौ साहित्यको पनि आ–आफ्नै पहिचान छ । साहित्य र व्याकरण भाषाका दुई अङ्ग हुन । साहित्य हामी पढेर लेखेर जान्न सक्छौ दिन प्रतिदिन केहि लेख्दै र पढ्दै जाने हो भने हाम्रो साहित्यमा पक्कै पनि सुधार आउछ अर्थात अनुराग बढ्छ । अझ यसलाई उखान टुक्का राखेर गहना लगाएकी कोरिबाटी गरेकी नयाँ दुलही जस्ती सुशोभित बनाउन सक्छौ। मैले यहाँनेर बुझाउन चाहन्छु साहित्य भनेको रुखको गुदी हो यसलाई बङ्ग्याउन सक्छौ यसलाई सजिलैसँग नचाउन सक्छौ ।
वास्तवमा साहित्य आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्दा होस् या कुनै सोच होस्, कुनै विचार होस् कुनै अनुभव होस् यी सबैलाई समेट्दा घुमाउरो पारामा कुनै कुरा पोख्नु मलाई साहित्य हो जस्तो लाग्छ । एउटा निश्चित अर्थ दिने शब्दहरुलाई वाक्य र वाक्यलाई अनुच्छेद अनि अनुच्छेदलाई कथा कविता र उपन्यासको रुप दिइने संसार नै साहित्य संसार हो । साहित्यको बारेमा हरेक व्यक्ति बिशेषका आफ्नै सोचाई हुन्छन् आफ्नो व्याख्या हुन्छन् । साहित्यलाई जे जस्तो हुन्छ दर्शन, शिक्षा, मनोरञ्जनको साधन वा जीवको उद्देश्य, साधन, तपस्या आदि । साहित्यले कतै शिक्षा दिने ज्ञान दिने मनोरञ्जन दिने पनि हुन्छ ।
कसैका निम्ति साहित्य नै जीवन हो तर आजको हाम्रो नयाँ पिँढिको लागि साहित्य के हो त्यो जान्नु आवश्यक देखिन्छ । आजका नयाँ पिँढीका हामी सरसर्ति यहि बुझिरहेका छौ की कतिपय यस्ता पनि छौ जुन साहित्यको नामै सुन्दा अल्छी र झर्को लाग्दो विषय भन्ने सम्झन्छौ । हामी कुनै यस्ता पनि छौ जुन साहित्यको नामै सुन्दा हाई आउछ र सुन्नु नपरे हुदो हो भन्छौ तर यदि कसैले फिल्म वा खेलकुदको कुरा निकाले चासो लिएर, ध्यान दिएर सुन्ने गर्छौ । आजको युग भनेको एउटा साहित्यबाटै निक्कै अगाडी बढने युग भएकाले यस क्षेत्रमा लाग्नु गर्न अनिवार्य देखिन्छ । यस सन्दर्भमा हाम्रा अग्रज साहित्यकारहरुले गरेको योगदानको के अर्थ रहन्छ ? के महत्व रहन्छ ? जब हामी तिनले गरेको योगदानको कदर गर्न सक्दैनौ, त्यसलाई अघि लगाउन सक्दैनौ भने हामी यो कहिल्यै नबिर्सौ भानुभक्तले जेलको यातना सहेर पनि साहित्यको निम्ति मरिमेटेको, लक्ष्मी प्रसादले आफ्नो अस्तित्व मेटिए पनि साहित्यका खम्बा नडग्मगाउन भनी दिएको योगदानको हामी के कसरी रक्षा गछौ रु यो हामी आफैले सोच्नु पर्ने कुरा आएको छ ।
अन्त्यमा भन्नु पर्दा साहित्य कसैको लागि बेइमानी हुन सक्छ र कसैका लागि सम्मान हुन सक्छ तर आजको परिवेशमा त्यसको अर्थ यो होइन कि हामी साहित्यको अवहेलना गरौ, हामीलाई साहित्य मन पर्दैन भने अरु साहित्यप्रेमी साथीभाईहरुलाई होच्याएर उनीहरुलाई हीनताबोध गराउने जस्तो नराम्रो काम नगरौ । अन्य क्षेत्रमा सफल हुन नसकेको मात्र साहित्यकार बन्दछन् भन्ने जुन गलत भावना वा सोचाइ हामीमा छ त्यो त्यागौ । हामीले यहानेर बुझनुपर्छ कि साहित्यको अवहेलना भनेको भाषाको अवहेलना हो किनभने साहित्यले भाषालाई डो¥याएको हुन्छ । नेपाली भाषाको उन्नतिमा योगदान दिनुपर्छ ।
नेपाली भाषा साहित्यको उन्नति नगर्नाले भोलि आफ्ना मनका कुरा पोख्ने भाषा खोज्नु नपर्ला भन्न सकिदैन । त्यसैले आजै देखि साहित्यको हामी सबैले महत्व बुझ्नु पर्छ । मैले यो कुरा सबैमा छितारर्न चाहान्छु अहिलेको बर्तमान परिवेशमा साहित्यमा रुचि नभएको व्यक्ति पशु सरह ठानिन्छ किनभने जीवन्त मानिसको पहिचान नै भावना र तिनको उथलपुथल हो र साहित्य भनेको भनेको ती उथलपुथल पोख्ने तरिका हो । यसै कुरालाई व्यक्त गर्दै धरणीधर कोइरालाले आफ्नो कविता ‘साहित्य सुधामा’ भने झै म पनि भन्दछु साहित्यमा नेपाली शिक्षा, साहित्य र नयाँ पिँढिको लागि अहिलेको वर्तमान युगमा अनिवार्य आवश्यक देखिन्छ ।
प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री स्टिभन हकिङको ७६ वर्षको उमेरमा ...